Hoggantoonni biyyoota garee G-20 Arjantiinaa keessatti wal gahii jalqaban - NuuralHudaa
Hoggantoonni biyyoota garee G-20 Arjantiinaa keessatti wal gahii jalqaban
On Nov 30, 2018 15
Biyyoonni garee G-20 jedhamuun beekaman biyyoota 19 kanneen diinagdee cimaa qabanii fi Gamtaa Awrooppaa yoo tahan, wal gahii isaanii kan waggaa Jum’aa har’aa Arjantiinaa magaalaa Buenos Aires keessatti jalqabanii jiru. Xiyyeeffannaan wal gahii isaanii dhimmoota diinagdee addunyaa fi jijjiirama haala qilleensaa yoo tahu, wal dhabbiin Raashiyaa fi Yukreen jiddutti dhiheenya kana muudate akkasumas ajjeechaan gaazeexeessaa Sa’uudii irratti raawwatame, gamanumaa yaada hoggantoota kanneenii kan gargar facaase tahuu odeeyfannoon arganne ni addeessa.
Prezdaantiin Turkiyaa Rajab Xayyib Erdogaan fi dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan wal gahii kana irratti kan hirmaataa jiran yoo tahu, Bin Salmaan wal gahii kana cinatti Erdogaan waliin mari’achuuf gaafii dhiheessuun isaa gabaafamee ture. Haa ta’u malee karoora marii hoggantoota lamaanii ilaalchisee hanga ammaatti wanti mirkanaahe hin jiru.
Haaluma walfakkaatuun hoggantoonni Ameerikaa fi Raashiyaa wal gahii kana cinatti lamaaniin mari’achuuf karoorfatanii kan turan yoo tahu, torbee darbe Raashiyaan markaboota Yukreen ugguruu isii hordofuun, Traamp wal gahii Puutiin waliin karoorfatee ture kan haqe tahuu beeksise.
July 6, 2022 sa;aa 7:39 am Update tahe